Xilliga Dayrta / Jiilaalka 2018: soo hel qaybaha muhiimka ah | Ragga Stylish
Zara dayrta / jiilaalka 2018
Waqtiga ayaa la gaadhay in diiradda la saaro Dayrta / Jiilaalka 2018 moodada hadda taas dharka xagaaga dabacsan iyo kuwa qabow ayaa leh maalmo tiro leh.
Bilaha ku-meelgaarka ah waxaan ku dari doonnaa lakabyo dhar ah muuqaalkeenna illaa ay cimiladu qallafsan tahay waxayna nagu qasbeysaa inaan u adeegsanno dhididka iyo jaakadaha qaro weyn iyo kabaha roobka. Raadi kuwee qaybaha muhiimka ah ee xilli ciyaareedkan:
1.1 Maro bunni ah iyo dhar caadi ah
1.2 XNUMXs dhididka
1.3 Baaskiil iyo adeegsi
2.1 Surwaal shaati ah
2.2 Surwaalka Tracksuit
Maro bunni ah iyo dhar caadi ah
Midabka moodada ah waa bunni. Shirkaduhu waxay sahamiyaan ficil ahaan dhammaan hooska midabkan ee la xiriira deyrta iyada oo loo marayo suudhadhka, jaakadaha dhaadheer, baalayaasha corduroy iyo funaanado tolmo leh. Sidoo kale waa wakhti ku habboon in lagu maalgeliyo dharka caadiga ah, sida herringbone ama houndstooth.
Dhinaca kale, Jiilaalkan waxaan mar kale heli doonnaa noocyo kala duwan oo aad u fara badan oo ka mid ah dhididka oo la kala dooran karo. Labbiska khafiifka ah iyo kuwa qaro weyn ee midabada dhexdhexaadka ah ee miyir-qabka ah ama lagu qurxiyey qaababka intarsan ee geesinimada leh. Dhinaceeda, kolalka dhaadheer iyo funaanadaha polo waxay sii wadi doonaan inay noqdaan ikhtiyaar xiiso leh oo lagu beddelo shaati suudh ah marka macnaha guud uu saxan yahay.
Sidoo kale, dayrta ayaa calaamadeynaysa soo noqoshada dhididka iyo jaakadaha raadraaca ka dib xagaaga kulul. Dhar leh astaamo saxeexan iyo naqshadaha 'XNUMXs' qabow ee taageerayaasha ciyaaraha fudud ku mashquuli doonaan, Qaab joojiyay inuu noqdo isbeddel fudud oo xididdada si xoog leh ugu dhex leh bulshada.
Dhammaan dharka isboortiga guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo qabow, laakiin gaar ahaan kuwa sumadaha iyo naqshadaha ku guuleystay 90-meeyadii. Noocyada isboortiga sida Champion, Kappa, Qaado iyo Ellesse waxay ku noqdeen qaybtii ugu horreysay ee uu waday qandhada retro.
Baaskiil iyo adeegsi
Warshaduhu waxay go'aansadeen inay buurta u dhaadhacaan magaalooyinka, jiilaalka qabowna waxay heli doonaan wax kasta oo ay ku qancaan inay ku guuleystaan. Xilliga Dayrta / Jiilaalka 2018 ayaa keeni doona qaybo badan oo dhiirrigeliya dharka buurta ee bakhaarada, oo ay ku jiraan jaakado suuf ah iyo dhammaan noocyada dharka sare ee farsamada.
Ka-faa'iideysiga waa isbeddel kale oo xilliga dayrta / jiilaalka 2018-2019 in usbuucyadii moodada ee ugu muhiimsanaa ay inaga tageen. Marka shaati flannel plaid ah iyo shaatiga denim iyo jaakadaha ayaa xiran. Haddii aad kudhamaato helitaanka dhadhanka dharka shaqada, ku dhiiran inaad tijaabiso qaybaha kale ee faa'iidada leh ee muuqaalkaaga, sida boodboodka, dusha sare iyo jaakadaha xamuulka. Xusuusnow in mid ka mid ah furayaasha ay tahay in la abuuro lakabyo badan oo leh dhar dhuuban oo dhexdhexaad ah.
Xilliga Dayrta / Jiilaalka 2018 ayaa nagu casuumaya inaan cusbooneysiino surwaalkeenna moodooyinka dabacsan. Jiinis, chinos iyo surwaal dhar ah ayaa qaata qaabab toosan oo duuban (oo ka ballaaran bowdada marka loo eego canqowga) Haddii aad doorbideyso jarista ugu adag (maqaar iyo caato), waa inaadan ka welwelin. Xilli ciyaareedkan dhammaan qaababka ayaa wada noolaan doona.
Saraawiisha darfadu waa ciil, halka markay tahay daabacaadda, waxaan helnaa laba jibbaaran, karbaashyo iyo houndstooth. Hadana haddii aad surwaal xamuul ah ku haysato qolkaaga, xilligan waa xilligii aad dib u heli lahayd oo aad u siin lahayd muuqaalkaaga taabasho waxtar leh. Haddii kale, dukaamada dharka way fududaan doontaa in mid la helo.
Sida aan kor ku soo sheegnay, qandhada dharka isboortiga ma joojiso dayrta. Tan iyo markii uu leeyahay naqshadeeyayaasha ugu fiican uguna saameynta badan gebi ahaanba dhiniciisa, sidoo kale uma muuqato inuu sameyn doono mararka qaar mustaqbalka dhow. Sidan, ayaa surwaalka tracksuit Waxay sii ahaan doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah dharka ragga.
Dharka dhididka ee xilligan ayaa leh astaamo waaweyn ama karbaash dhinac ah. Waxay sidoo kale ku yimaadaan midabyo adag. Waxaad ku xulaneysaa dookhaaga shaqsiyeed. Isla sidaas ayaa ku dhacda habka loo isku daro. Waad raaci kartaa sharciyada ama waxaad siin kartaa muuqaalkaaga shakhsi ahaaneed adoo ku daraya qaybo aan isboorti ahayn. Waana xilliga dayrta / jiilaalka 2018 moodada ayaa ka calaamadeyn doonta sidii waligeed maqnaanshaha xeerarka. Wax waliba waa socdaan.
Socodka socodka iyo isbedelada ka faa'iideysiga kuma koobnaan doonaan dharka. Kabaha dayrta / jiilaalka ayaa na keenaya Kabaha buurta iyo kabaha shaqada. Qaababkeeda mugga leh waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo qaabeyn lahaa kabaha canqowga ah ee Chelsea iyo Desierto..
Sida caadiga, maqaar iyo suede waxay kuwada wareegayaan marxaladda kudhowaad siman Derby, Oxford iyo Brogue kabahaiyo waliba rootida.
Gebi ahaanba waa ammaan in la yiraahdo taas kabaha isboortiga ayaa sii wadi doona inay dhaqaajiyaan tiro badan. Iyo dharbaaxada adag ee awoowe, oo gebi ahaanba jabaya sharraxaadda aan horay ugu baran jirnay qaybtaan, ugu dambeyntii waxay umuuqataa inay diyaar u yihiin inay halkaas gaaraan. Naqshadaha dib-u-celinta iyo qaabka skaterka ayaa sidoo kale la qaadaa.
Inta udhaxeysa moodeel aad u badan, waxaa sidoo kale jiri doona meel loogu talagalay kabaha yaryar, oo ay ku jiraan maqaarka cad ee caadiga ah, kabo si weyn ugu shaqeeya nooc kasta oo surwaal ah, laga soo bilaabo jiinis ilaa surwaal ku habboon, iyada oo loo marayo chinos iyo joggers.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Dayrta / qaboobaha 2018 moodada
Sida loo sameeyo xarig qaanso